झाँक्रीबाट कुटिएकी राधा बोक्सीको आरोपमा फेरि कुटिइन्, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
झाँक्रीबाट कुटिएकी राधा बोक्सीको आरोपमा फेरि कुटिइन्
कैलाली । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका ५ देउकलियाकी राधा चौधरी बोक्सीको आरोपमा फेरि कुटिएकी छन् ।
राधालाई कुटेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडको प्रहरी टोलीले स्थानीय २८ वर्षीय कालीचरण चौधरीलाई बुधबार पक्राउ गरेको छ । राधा आफैले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा आफूमाथि कुटपिट भएको फोन गरेर जानकारी दिएपछि जिप्रकाले इप्रकालाई उनको उद्धार गर्न तथा आरोपी पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
जिप्रकाको निर्देशनपछि आरोपी कालिचरणलाई बुधबारै पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको डिएसपी हरीबहादुर वलीले डीसीनेपाललाई जानकारी दिए ।
पक्राउ परेका चौधरी हाल इलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडको हिरासतमा रहेको र उनीमाथि कानुनी कारबाही हुने डिएसपी वलीले बताए । पीडित राधाले कालिचरणविरुद्ध जाहेरीसमेत दिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कुटपिट गर्ने कालीचरणलाई मुकुली अपराध संहिंता २०७४ अन्तर्गत सजाय हुने डीएसपी वलीले जानकारी दिए ।
यसअघि गत वर्ष फागुन २४ गते नारी दिवसका दिन स्थानीय भोलेबाबा भनिने रामबहादुर चौधरीले बोक्सी भगाउने भन्दै राधा चौधरीलाई निर्घाट कुटपिट गरेका थिए ।
रामबहादुरसहित उनका सहयोगी दुईजना महिला अहिले पनि कैलाली कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन् । उनै राधा फेरि बोक्सीको आरोपमा कुटपिटमा परेकी हुन् ।